AmaHubo 141 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
Umthandazo wokucela ukuvikelwa
“Kwangathi umthandazo wami ungaba njengempepho” (2)
Ukusola kolungile kunjengamafutha (5)
Ababi bawela emanetheni abo (10)
Ihubo likaDavide. 141 O Jehova, ngiyakubiza. + Shesha uzongisiza. + Ngilalele lapho ngikubiza. + 2 Kwangathi umthandazo wami ungaba njengempepho + elungisiwe phambi kwakho, +Izandla zami eziphakanyisiwe zibe njengomnikelo wokudla okusanhlamvu wakusihlwa. + 3 O Jehova, bekela umlomo wami umqaphi,Beka umlindi aqaphe umnyango wezindebe zami. + 4 Ungayivumeli inhliziyo yami ukuba ithande okubi, +Ukuba ngenze izinto ezimbi nabantu ababi;Sengathi ngingezitike ngezibiliboco zabo. 5 Uma olungile engangishaya, ubeyobe engibonisa uthando oluqotho; +Uma engisola, bekuyoba njengamafutha ekhanda lami, +Ikhanda lami elingeke liwenqabe. + Umthandazo wami ubuyoqhubeka ngisho nalapho ebhekene nezinhlekelele. 6 Nakuba abahluleli babo bephonswa phansi eweni,Abantu bayowezwa amazwi ami ngoba amnandi. 7 Njengalapho umuntu elima, eqhekeza umhlabathi,Amathambo ethu asakazeke kanjalo emlonyeni weThuna.* 8 Kodwa amehlo ami abheke kuwe, O Jehova Nkosi EnguMbusi. + Ngiphephele kuwe. Ungakususi ukuphila kwami. 9 Ngivikele ekubanjweni yisicupho abangibekele sona,Ezingibeni zabenzi bokubi. 10 Ababi bayowela emanethini abo kanyekanye +Kuyilapho mina ngidlula ngokuphepha.
^ Noma, “weShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.